Iindaba zokuhlela njengezimvo zesipho | Uncwadi lwangoku
Izinto ezinqabileyo zoncwadi njengezimvo zesipho
UCarmen Guillen | | Iincwadi, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Ndimele nditsho, kwaye ndilungise ukuba ndiphosakele, ukuba abantu abafana nathi, abathanda uncwadi, benza kube lula kakhulu usanta Claus okanye ku amadoda alumkileyo. Kulula njengokwazi kancinci (yintoni encinci, akunjalo?) Iincasa zethu zoncwadi ukuze sikwazi ukufumana isipho ngokuchanekileyo ... Musa ukundinika incwadi kaBelén Esteban, kulungile? Enkosi!
Kungenxa yesi sizathu sokuba ndikuphathele ezinye iindaba zoncwadi abasandula ukushiya okanye malunga nokuhamba kule nyanga, inokuba ngumbono olungileyo wesipho soku IKrismesi esele sinayo ngaphezulu.
1 "ILabyrinth yomoya", nguCarlos Ruiz Zafón
2 "I-Olimpiki yabalusizi" nguYasmina Khadra
3 ILandon. Ngoku nangonaphakade »ngu-Anna Todd
4 "Intombi yaseCayetana" nguCarmen Posadas
5 «Ngamehlo akho kuphela» nguJJ Benítez
"ILabyrinth yomoya", nguCarlos Ruiz Zafón
Ngale ncwadi sifika esiphelweni sesaga se "Isithunzi somoya". Kwabo bantu bafunde ezi ncwadi zintathu zikhutshwe ukuza kuthi ga ngoku ngulo mbhali waseCatalan, le nto intsha yokubhala inokuba sisipho esifanelekileyo. Nantsi ingqungquthela yayo:
E-Barcelona ekupheleni kweminyaka yoo-50, uDaniel Sempere akasenguye laa mfana wafumanisa incwadi eya kutshintsha ubomi bakhe phakathi kweendlela zamangcwaba eencwadi ezilibalekileyo. Imfihlelo yokufa kukanina u-Isabella ivule inzonzobila emphefumlweni wakhe apho umfazi wakhe uBea kunye nomhlobo wakhe othembekileyo uFermín bezama ukumsindisa.
Kanye xa uDaniel ekholelwa ukuba linyathelo elinye ukusuka ekusombululeni le ntsumantsumane, iyelenqe elinzulu kakhulu kwaye limnyama kunokuba wayenokucinga ukuba liyatyhila iwebhu yakhe isuka emathunjini oMthetho. Kulapho u-Alicia Gris, umphefumlo owazalwa usuka kwimithunzi yemfazwe, ubonakala ebakhokelela entliziyweni yobumnyama kwaye atyhile imbali efihlakeleyo yosapho ... nangona ngexabiso elibi.
"I-Olimpiki yabalusizi" nguYasmina Khadra
Kubantu abajonge encwadini ukuze bafumane ibali elinomdla kwaye lahlukile kwabanye.
Intsomi eyonakalisayo ezele bububele obusifaka kwindalo yonke yabalinganiswa ngaphandle kwexesha langoku okanye langoku. Ifunyanwa phakathi komhlaba oyinkangala nolwandle, ngaphandle kwexesha kunye nendawo, lo msebenzi wobuhle obungenakulinganiswa yintsimi esasazekayo enabantu abahlala emaphethelweni abaye bagqiba kwelokuba balifulathele ihlabathi.
UAch, uJunior, uPacha kunye nabanye abalinganiswa abamnyama nabanomdla bahlala apho. Indawo yezimanga, yesizungu esikhulu, yeentloni neemfihlo ezingathethekiyo. Kodwa kuloo ndawo umoya wobumbano uzelwe, imvakalelo yokunxulumana ehluke kubuntu bomntu banamhlanje.
ILandon. Ngoku nangonaphakade »ngu-Anna Todd
Ukuba ufuna ukunika umntu uncwadi selulaMhlawumbi le ncwadi ka-Anna Todd ungayithanda. Iziphumo zale saga zintsha njengoko zinomdla.
Ubomi bukaLandon eNew York abuguquki kanye ngendlela awayecinga ngayo. UTessa uselusizi kwaye uzivalele ngaphakathi ngenxa kaHardin, umsebenzi awufumeneyo awonwabisi kwaye, ngaphezulu, iDakota iphinde yavela ebomini bakhe kanye xa eqala ukuziva into kuNora omangalisayo noyintsumantsumane. Kodwa uLandon ukulungele ukoyisa yonke imiqobo yokufumana indlela kwaye ekugqibeleni afumane uthando lokwenene. Ngubani oza kuhlala entliziyweni yakho?
"Intombi yaseCayetana" nguCarmen Posadas
Kulabo bantu bathanda umhlaba we "ntliziyo" kunye ibali.
Isiqendu esimangalisayo nesilibalekileyo esiba nomnye wabasetyhini abadumileyo kwimbali yethu: UCayetana de Alba, imyuziyam engalibalekiyo kaGoya. I-Eccentric, i-capricious and free, ngaphezu kweminyaka engamakhulu amabini amandla ayo okuloba ahlala engatshintshanga. Nangona kunjalo, bambalwa abaziyo ukuba iiDuchess zamkele intombazana emnyama, uMaría Luz, awayemthanda kwaye emkhulisa njengentombi kwaye eshiya kuye inxalenye yobutyebi bakhe. UCarmen Posadas unesandla sokuzibandakanya koomama ababini: lowo wamkelayo, kunye nothando kunye nemidlalo yakhe kwinkundla kaCarlos IV, indlwane yokwenyani yamayelenqe, kunye neyebhayoloji, iTrinidad ethi, ikhoboka laseSpain, lisokola ukufumana umntwana awayethathwe kuye xa ezalwa.
«Ngamehlo akho kuphela» nguJJ Benítez
Kulabo bayonwabelayo i-paranormal kwaye kunokwenzeka ukuba ikho Ubomi obungaphandle komhlaba.
NgoSeptemba we2016, UJJ Benítez ujikeleza i-70 kunye ne-45 yophando lwe-UFO. Okwangoku ungomnye wabaphandi abaphambili. Ngokuhambelana nezi zikhumbuzo zimbini, umbhali ubhala
Amehlo akho kuphela njengomsebenzi wesikhumbuzo, emva kweencwadi ezingama-22 ngalo mbandela. Ibandakanya iimeko ze-UFO ezingama-300 ezingapapashwa ngokupheleleyo, ezibhaliswe kwihlabathi liphela, ethi ngesizathu esinye okanye esinye ichaphazele umphandi.
Le ncwadi, igcwele umdla kwaye inomdla, igqityiwe ngemifanekiso engaphezulu kwama-300 yoqobo, ekhutshwe kwiincwadana zamanqaku zombhali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izinto ezinqabileyo zoncwadi njengezimvo zesipho
Ishumi lombhali olungileyo